Wareysigaaga gaarka ah ee CGVS/CGRA | Fedasil info - informatieplatform voor asielzoekers in België
Wareysigaaga gaarka ah ee CGVS/CGRA
Inta lagu jiro wareysiga gaarka ah, waxaad sharraxaysaa sababta aad uga soo tagtay waddankaaga asalka ah.
Wareysiga ka dhacayo CGVS/CGRA waa marxalad aad ugu muhiimsan habraacaaga magangelyada caalamiga ah. Inta lagu jiro wareysiga, waxaad si faahfaahsan u sharraxaysaa sababta aad ugu soo tagtay dalkaaga hooyo iyo sababta aad uga codsanaysid magangelyada gudaha Biljimka. Waxaa muhiim ah inaad sheegto runta!
Sida ugu fiican ee loogu diyaar garoobo wareysiga?
Waxaan kugula talinaynaa inaad u diyaar garowdo waresigaaga, adigoo caawimaad ka helayo qareenkaaga, shaqaalahaaga bulshada, ama urur. Diyaarso dhammaan dukumentiyada loo adeegsan karo caddeyn ahaan.
Sidee ayuu wareysiga u soconayaa?
Waxaad aadaysaa xafiisyada CGVS/CGRA gudaha Brussels maalinta lagu muujiyay casumaadaada. Waxaad u sharraxaysaa sarkaalka CGVS/CGRA, si faahfaahsan oo ugu suurto gal badan, sababta aad uga soo carartay waddankaaga iyo waxa aad ka cabsanayso inay dhacaan. Si xor ah ayaad u hadli kartaa, wareysigani wuxuu ahaan doonaa qarsoodi. Waxaad soo wadan kartaa qareenkaaga (midaani waa lagu talinayaa!) ama qof aad ku kalsoon tahay.
Inta lagu jiro wareysiga, sarkaalka CGVS/CGRA ayaa ku weydiin doona su'aalo. Wareysiga ayaa qaadan karo saacado dhowr ah.
Waa inaad sheegto runta oo aad samayso wax kasta aad awoodo si aad u caddeyso aqoonsigaaga, asalkaaga, iyo safarka aad ku timid Biljimka.
Haddii aad ku bixisay macluumaad been-abuur ah marxalad kasta ee habraaca (tus. ku saabsan aqoonsigaaga ama asalka), weli waxaad haysataa waqti aad runta ku sheegto inta lagu jiro wareysiga. Waxaa ku jiro dantaada.
Haddii aad heshay dukumentiyo aan weli aadan ka haysan nuqul, waxaad u soo gudbin kartaa CGVS/CGRA ama waxaad u soo qaadan kartaa wareysiga.
Haddii lagama maarmaan tahay, turjumaan ayaa fasiri doona su'aalaha sarkaalka CGVS/CGRA. Isaga ama iyada ayaa fasiri doona jawaabahaaga. Turjumaanka waxaa magacaaba CGVS/CGRA oo waa inuu ixtiraamaa qarsoodida wareysiga.
Haddii, ka dib wareysiga, CGVS/CGRA ay doonayaan inay ku su'aalaan mar kale, waxay ku soo dirayaan casumaad.
Sarkaalka CGVS/CGRA ayaa qoraal qaadan doona inta aad hadlayso. Waxaad xaq u leedahay inaad hesho nuqul ka mid ah qoraaladan, si aad qareenkaaga u wada hubisaan si aad u aragtaan waxa la qoray inay sax yihiin iyo si aad ugu dirto faaladaada CGVS/CGRA.
Ha ka waaban inaad talo weydiisato qareenkaaga.
Wareysigaaga gaarka ah ee CGVS/CGRA: Qiyaasaha fayraska corona Ma qabtaa dhibaatooyin caafimaad?